पम्फा भुसालको तर्क- ‘षड्‌यन्त्र गहिरिएपछि के गर्ने त?’
नेपाल लाइभ बुधबार, माघ २१, २०७७, १८:०९
नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ। विराेध सभा, प्रदर्शन र र्‍याली गरिरहेको यो पक्षले भोलि, बिहीबारका लागि आमहड्ताल नै आह्वान गरेकाे छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा बुधबार राष्ट्रपतिले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३२ जना पदाधिकारीलाई नियुक्त गरेर सपथ दिलाएपछि प्रचण्ड-माधव पक्ष झन् आक्रोशित बनेको छ। उसले सरकारको कदम गैरसंवैधानिक भन्दै आमहड्तालमा जाने घोषणा गरेको हो। आमजनतालाई नै सास्ती दिनेगरी आमहड्ताल किन घोषणा गरिएको भन्दै प्रचण्ड–माधव पक्षकी स्थायी समिति सदस्य एवं संघर्ष समितिका सहसंयोजक पम्फा भुसाललाई नेपाल लाइभले प्रश्न गरेको छ।
बिहीबारको आमहड्ताल कार्यक्रम कसका लागि घोषणा गर्नुभयो ?
हामी प्रतिगमन र संविधानमाथि कू का विरुद्ध संघर्षमा छँदै थियौं। एक्कासी गैरसंवैधानिक रूपमा संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी नियुक्त गरियो। जसको सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट विचाराधीन अवस्थामा छ। यस विषयमा देशव्यापी विरोध छ। आज बिहानै मिर्मिरे उज्यालोमै गएर षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले सपथ भनेर राष्ट्रपतिले गैरकानूनी काम गराइन्। त्यसले अत्यन्तै गम्भीर बनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिगमन सच्याउने भन्दापनि अझ पेलेर जाने जुन तरिका अपनाए। त्यसको प्रतिवाद हो।
धेरैको चहाना आमजनतालाई सास्ती दिएर बन्द हड्ताल भन्दा रचनात्मक आन्दोलन गरेको भए हुन्थ्यो भन्नेछ, तपाईंहरू भने...
विल्कुल हामी रचनात्मक आन्दोलनकै पक्षमा थियौं। प्रतिनिधि सभाको प्रतिगामी निर्णयका विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका थियाैं। हाम्रा २८ गतेसम्म घोषित आन्दोलन नै थिए। तर, यहीबीचमा काम चलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले ठूलो संख्यामा नियुक्ति गर्‍यो। जसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका नियुक्तिहरु गरेर अघि बढ्ने काम गर्दै छ। त्यसो गर्नु यो गम्भीर परिघटना हो। त्यसको प्रतिवाद शान्तिपूर्ण आन्दोलनको उच्चतम रूप आमहड्ताल हो। हामीले त्यही अपनायौं। षडयन्त्र गहिरिएपछि हामी आमहड्तालमा जान बाध्य भयाैं।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका भ्रष्टाचार अनियमितताको बुक्लेट नै तयार गरेर वितरण गर्नुभयो। तर, तपाईंहरूलाई नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकारहरूले आफ्नो तर्फबाट स्वेतपत्र जारी गर्नुस् भन्दा किन नगरेको ?
हामी नियमित ढंगले २८ गते जनप्रदर्शन अर्थात आमसभा गर्दैछौं। हामी स्वभाविकै ढंगले त्यहाँसम्म जाने भन्ने थियो। त्यसमा हामीले सोचेर पनि ध्यान पुर्‍याउन सकेका छैनौं। त्यसलाई गर्ने भनेरै गम्भीर रुपमा लिइएको छ। तर,आज काम चलाउ सरकारको निर्णयले हामीलाई छिटो प्रतिवाद गर्ने अवस्था आयो। राष्ट्रिय रूपमा नै प्रतिवाद गर्ने विधि हो। आमहड्ताल गर्‍याैं।
ओली पक्षले २३ गते आमसभा गर्दै छ। त्यसको एक दिनअघि आमहड्ताल गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउँदैन ?
आजको नियुक्तिका कारणले भोलि आमअड्ताल राख्याैं। हामीले त्यो कार्यक्रम पर्सी राखेनौं नि। हामीले झडप चाहेको भए २३ गते आमहड्ताल राख्ने थियौं। हामीले २३ त राखेनौं। हामीले आपसी भिड्न्तको स्थिति चाहेका छैनौं। हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रतिवाद गर्छौैं। प्रतिक्रान्तिका नाइके केपी ओली र उसको गुटका विरुद्ध राजनीतिक रूपमै प्रतिवाद गर्छौं। जुन जारी राखेका छौं।
आन्दोलनका कार्यक्रम चरणवद्ध पो हुनुपर्ने, एकै पटक आमहड्तालमै किन उत्रनुभयो ?
यो आजको परिघटनालाई हेर्दा त्यसको प्रतिवाद देशव्यापी रूपमा होस् भन्ने कुराका लागि हो। यसो हुँदा देशैभर एउटा प्रतिवादको सन्देश जाने भएकाले हो।
आमहड्तालबाट केही भएन भने त्यसपछि के गर्नुहुन्छ ?
त्यसरी पनि आन्दोलन गर्दा भएन भने विगतका परिवर्तनका आन्दोलन के भएका छन् ? परिवर्तनका आन्दोलनमा एक दिन होइन, दुई दिन होइन दर्जनौं दिन के भएका थिए ? भोलिको बन्दको आयोजना गरेपछि २८ गतेको जनप्रदर्शनमा जान्छौं। त्यसपछि हामी सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खेर बस्छौं। नभए हामी अघोषित आमहड्ताल भन्न सक्थ्यौं। हामीले त्यस्तो भनेनौं। आज प्रतिवाद आमहड्ताल हो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको पर्खेर बस्ने छौं। सर्वोच्च अदालको निर्णयमा हामीलाई विश्वास छ। संविधान अनुरुप प्रतिगमन सच्चिने छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने छ। देश एउटा नियमित वैधानिक प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने छ। हामीले सरकारात्मक ढंगले मात्रै सोचेका छौं। अरु हाइपोथेटिकल कुरा नगरौं।